Copycat Alaabta Xashiishada waxay Halis u tahay Caafimaadka Dadweynaha • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Copycat alaabada xashiishadda ayaa khatar ku ah caafimaadka bulshada
Copycat alaabada xashiishadda ayaa khatar ku ah caafimaadka bulshada
albaabka Ties Inc. April 30 2022
maqaal by Ties Inc. April 30 2022
Noocyada mega ee Maraykanka sida Kellog's iyo Pepsi waa ay jiran oo daaleen. Alaabooyinkooda waxaa si indho la'aan ah u guuriyay bixiyeyaasha wax soo saarka xashiishadda. Tani waxay ku kacaysaa kharashka caafimaadka dadweynaha. Waxay si wadajir ah u rabaan in tani ay joojiso oo ay weydiistaan ​​Congress-ka inuu sameeyo wax badan si loo faafiyo alaabtan been abuurka ah.
Shirkadaha waaweyn ee cuntada iyo cabitaanka sida Pepsi, General Mills iyo Kellogg's ayaa ugu baaqaya Congress-ka inay sameeyaan wax badan si ay uga hortagaan faafitaanka xashiishadda ay ku jirto alaabada been abuurka ah ee u ekaysiiya summadooda caanka ah.
Warqad ka soo baxday Ururka Macaamiisha oo loo diray sharci-dejiyeyaasha Congress-ka Arbacadii, in ka badan XNUMX shirkadood iyo ururo warshadeed ayaa sheegay in baakadaha marin habaabinta ah. alaabta xashiishka - kuwaas oo u muuqda qaabka alaabta ganacsiga caanka ah - waxay halis u yihiin nabadgelyada dadweynaha. Gaar ahaan carruurta.
"In kasta oo xashiishadda (iyo mararka qaarkood THC) ay sharci ka tahay gobollada qaarkood, isticmaalka noocyadan caanka ah, si cad iyada oo aan oggolaansho laga helin milkiilayaasha astaanta, badeecadaha cuntada ayaa khatar weyn u ah caafimaadka iyo badbaadada macaamiisha," warqadda ayaa akhrinaysa.
Tallaabooyinka ka dhanka ah alaabada xashiishada ee been abuurka ah
Hal xal oo suurtagal ah oo shirkaduhu soo jeedinayaan ayaa ah in si adag loo ciqaabo nuqulladan. Saxiixayaasha warqadda loo diro Congress-ka ee mowduuca waxaa ka mid ah Shirkadda Kellogg, PepsiCo, General Mills, Ururka Dubiyaasha Mareykanka, Isbaheysiga Muwaadiniinta Dijital ah, Mondelēz International, Ururka Alaabada Dhirta ee Mareykanka, Ururka Dharka & Suugo, iyo in ka badan.
Ka hortagga isticmaalka marijuana ee carruurta aan qaan-gaarin waa hadaf guud. In kasta oo daraasaadka ay federaalku maalgeliso ay ogaadeen in isticmaalka xashiishadda ee dhallinyaradu ay xasilloon tahay ama xitaa hoos u dhacday gobollada sharciyeeyay oo nidaamiyay marijuana, waxaa la isku raacsan yahay in taxaddarrada la qaado si loo hubiyo in dhallinyaradu aanay si lama filaan ah u isticmaalin waxyaabaha xashiishadda.
Sannadkii hore agagaarka Halloween, qareeno guud oo ka kala yimid gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa uga digay waalidiinta waxyaabaha marijuanaada sharci darrada ah ee la mid ah nacnaca caanka ah iyo cunnada fudud sida Cheetos, Nerds iyo Oreos, kuwaas oo jahawareer ku keeni kara carruurta una horseedi kara sakhraan shil ah.
Akhri wax dheeraad ah daqiiqad marijuana.net (Isha, EN)
Sanduuqa dawladda UK ayaa ku maalgeliya saliidda xashiishadda iyo warshadda London
Faafidda xashiishadda Kanada
David Beckham's CBD Company wuxuu diiradda saarayaa…
Seddex faa iido oo ku jirta dhejiska CBD?
27 Oktoobar 2020
Marijuana oo boostada lagu soo diro 2021. Maxaa...